Ahoana No Fomba Ahazoana Adobe Spark MAIMAIMPOANA Sy Ara-Dalàna - Fampidinana Adobe Spark Maimaim-Poana 2022
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Spark Maimaim-Poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-25, Malagasy Blog
Lisansa: Drafitra fanombohana
Mifanentana: Web / IOS / Android
ADOBE SPARK MAIMAIMPOANA
Azonao atao izao ny misintona ny Adobe Spark maimaim-poana ary mampiasa ny fampiharana ho an'ny fitaovana Android sy IOS. Ary koa, manana kinova WEB izy io. Ny fampiharana dia manasongadina fitaovana ahafahan'ny mpampiasa mamorona lahatsoratra media sosialy misarika ny saina.
Tombontsoa amin'ny Adobe Spark Free
Tsy misy drafitra Adobe Spark Premium
Famaranana famoronana ho an'ny horonan-tsary
Miorina amin'ny mpampiasa: mandany 5 minitra fotsiny hianaranao ny fampiasana ny fampiharana
Amin'ny ankapobeny: azo atao ny miasa miaraka amin'ny horonan-tsary, sary ary pejy
Manome ny mpampiasa sary sy mozika tsy misy mpanjaka
Inona no tokony ho fantatro momba ny vidin'ny Adobe Spark?
Azonao atao ny mampiasa ny Adobe Spark Starter Plan, na amin'ny finday na amin'ny tranonkala, maimaimpoana. Io dia ahafahanao mamorona endrika endrika matihanina, manova ary mampakatra ny atiny nefa tsy mandany dolara. Ahitana endritsoratra sy fomba maro maimaimpoana ho an'ny tsiro rehetra ny drafitra.
Afaka mampiasa Adobe Spark ve ny mpianatra?
Mazava ho azy! Ankoatr'izay, Adobe dia mino fa ny mpianatra sy ny tanora dia tokony hampiasa Adobe Spark eo am-panaovana ny tetikasan'izy ireo. Izany no antony namoronan'ilay orinasa Adobe Spark ho an'ny Fanabeazana maimaimpoana manokana ho an'ireo mpampiasa tanora.
JEREO NY DISCOUNTS
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana Adobe Spark?
Azo atao ny misintona ny fampiharana avy amin'ny Play Market na App store. Aorian'ny fametrahana dia azonao atao ny miditra amin'ny kaonty Facebook anao. Azonao atao koa ny mampiasa ny tsimbadika an-tserasera Adobe Spark hamoronana lahatsoratra.
Azoko atao ve ny mampiasa ny endritsako amin'ny fampiharana Adobe Spark?
Ie. Rehefa avy nampakatra endri-tsoratra ianao dia azonao ampiasaina amin'ny fampiharana Spark amin'ny Internet na iOS amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny endritsoratra ao amin'ny Adobe SparkPost na amin'ny fisafidianana lohahevitra iray izay misy ny fononao.
Sintomy ny volo maimaim-poana
Misy fetrany ve ny isan'ireo tetik'asa hampiantranoin'ny Adobe SP?
Tsy mametra ny isan'ny tetikasa Spark i Adobe amin'izao fotoana izao mba hahafahanao manohy mamorona sy mampakatra ny atiny.
Na eo aza ny zava-misy fa ny Adobe SP dia rindrambaiko maimaimpoana, misy ireo programa antsoina hoe "vaky" izay milaza fa manome endrika hafa.
Ny loza ateraky ny fahazoana ilay app izay tsy mandeha
Ny risika kely indrindra raha mametraka kinova piraty amin'ny rindrambaiko sasany ianao dia mahazo rakitra tsy miasa na programa diso izay misy manampy.
Andraikitry ny fandikana lalàna
Raha misintona kinova sandoka Adobe Spark ianao dia afaka mahazo subpoena sy onitra $ 1000 amin'ny fandikana a lisansa rindrambaiko ary mampiasa rindrambaiko piraty amin'ny solo-sainao manokana na smartphone. Tsara ny manonona fa amin'ny tranga sasany dia mety higadra mandritry ny 5 taona ianao.
Mampidi-doza kokoa ny mametraka rakitra APK, indrindra raha misintona Photoshop Spark avy amin'ny loharanom-piraty ianao. Mety misy virus io rakitra io.
Toy ny fitsipika, malware amin'ny finday nozaraina ho fampiharana mahazatra. Mazava ho azy, ankoatry ny Google Play, misy fivarotana fampiharana hafa izay karapan'ny virus ny rindranasa sy ny lalao.
Na izany aza, na ny fitaovan'ny Google aza tsy afaka mamantatra kaody ratsy. Ka inona no azonao antenaina amin'ny fizahana anti-virus ataon'ny orinasa kely kokoa? Misy ny vokatra ateraky ny fametrahana rindrambaiko manimba toa ny asan'ny fitaovana tsy milamina, ny halatra data, ny fanampiana marobe, sns.
Mba tsy hampidi-doza anao, vakio ny lahatsoratro Ahoana no ahazoana Adobe Creative Cloud MAIMAIMPOANA.
Solosaina maimaim-poana amin'ny Adobe Spark
Na eo aza ny fiasa mandroso amin'ny Adobe Spark maimaim-poana, mety ho liana amin'ny fampiharana sy serivisy maimaimpoana hafa ianao amin'ny famolavolana ny atiny media sosialy.
Mampiasà CANVA MAIMAIMPOANA
Modely maimaimpoana maro
Tsy azonao atao ny manova ny haben'ny sary mandritra ny asa
Tsy azo atao ny mampiasa singa sary avy amin'ny modely samihafa
Raha tsy te hampiasa SparkPost Adobe ianao dia misy safidy tsara hafa. Nametraka tanjona ny hampivelatra ny famolavolana tranonkala ho an'ny rehetra ny mpamorona Canva.
Amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity dia azonao atao ny mamadika ny hevitrao amin'ny atiny misy sary na dia tsy hainao aza ny manao sary. Ny serivisy dia miasa amin'ny tarihiny-ary-mitete . Afaka mampiasa Canva maimaim-poana ianao. Na izany aza, misy sary aloa.
Toy ny amin'ny Adobe Spark maimaim-poana, ny mpampiasa Canva dia mahazo modely am-polony, sary maimaimpoana, fanangonana sary masina, endritsoratra, fiaviana, loko. Azonao atao koa ny mamorona ny maodelinao manokana avy am-boalohany. Ny fampiharana dia misy na amin'ny sehatra Android na IOS.
Fantaro bebe kokoa ny rindrambaiko Adobe maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny finday avo lenta.
Mampiasà EASIL MAIMAIM-POANA
Manampy ny mpampiasa
Tsy mila fametrahana
Fitaovana mahaliana sasany no aloa
Analog hafa maimaim-poana Adobe Spark dia Easil. Ny tombony lehibe an'ity fitaovana ity dia ny fampiasana azy sy fanavaozana tsy tapaka ny modely arakaraka ny fironana farany amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy.
Ohatra, manolotra modely goavambe Instagram Story izy ireo. Mandritra ny famoronana ny tetikasanao, azonao atao ny mampiasa ambaratonga fototra na ambaratonga ho an'ny mpamorona toa ny Layers, Design Merge (manambatra singa misy endrika hafa) ary Text Effects.
Easil dia malaza amin'ny mpiorina sy ny mpamorona matihanina satria mora ny mianatra ary manana endrika isan-karazany.
Mampiasà DESYGNER MAIMAIMPOANA
Fitaovana famolavolana tsotra nefa mahery
Fampisehoana hisintona ary hampidinana
Ny fahafahan'ny fanovana sary, endritsoratra, loko ary lahatsoratra
Layers, effects, ary fisie pejy maro
Rava ny rafitra
Raha manana Internet ianao dia afaka mampiasa Desygner na aiza na aiza satria rindrambaiko an-tserasera io. Raha hampiasa ny endri-javatra rehetra dia mila mamorona kaonty ianao.
Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny alàlan'ny kaontinao mailaka, Facebook na Google. Na eo aza ny fandaharana dia maimaim-poana, azonao atao ny mividy famandrihana premium isam-bolana na isan-taona. Na izany aza, raha vao manomboka ianao, dia ho ampy ho anao ny fiasa amin'ny kinova maimaimpoana.
Ny programa dia namboarina tamin'ny fomba izay na ireo mpampiasa tsy za-draharaha aza dia afaka mamolavola sy mamorona sora-baventy, flyer, afisy, fanasana, fitaovam-barotra mahasarika maso, karatra fandraharahana, doka, sary an-tserasera, sns.
Na mampiasa kinova birao na fampiharana finday ianao dia ho mora ny mamorona ny tetikasanao voalohany. Hanombohana azy dia mila misafidy karazana tetikasa sy modely efa voaomana mialoha ianao. Raha mpamorona za-draharaha ianao, dia afaka mamorona tetikasa iray hatrany am-boalohany.
Sintomy ny Adobe Spark Free
Sintomy MAIMAIMPOANA ADOBE SPARK
Manoro hevitra anao aho hampiasa Adobe Spark maimaimpoana hamoronana lahatsoratra media sosialy tany am-boalohany, satria ity rindrambaiko ity dia manolotra fitaovana sy modely goavambe maimaim-poana. Ankoatr'izay, ny mpamorona dia manolotra fiasa fanampiny amin'ny vidiny maotina tokoa. Ny zava-dehibe tiako amin'ny Adobe Spark dia ny fahafaha-mamboatra ny singa rehetra mandritra ny fizotran'ny asa.
Zahao hoe misy fihenam-bidy amin'ny Adobe hahazoana ny fampiharana tianao amin'ny vidiny mihena.
Tombony Adobe Spark
Famerenana Rindrambaiko Visme Online Design 2022
Top 11 Canva Alternatives Tsara Indrindra ao 2022
Sintomy ny Photoshop Online
Ampidino ny Lightroom Online
Mpanonta Gimp amin'ny Internet